Ngathi | IQELA LECHUNKAI
IQELA le-CHUNKAI lasekwa ngo-1995, kwaye ngoku lahlulwe laba ziinxalenye ezintathu:
I-Shanghai Shenhe Packing Technology Co, Ltd-ubukhulu becala kwimveliso zeplastiki
I-Feng Qi Feng iTekhnoloji yokuPrinta (i-Shanghai) Pty, Ltd - ikakhulu kwimveliso zamaphepha
Inkampani iShanghai Chunkai Trading Co., Ltd .-- ephambili kwishishini lokungenisa nokuthumela ngaphandle
IQELA le-CHUNKAI lizinikele ekwakheni inkampani yokupakisha ephezulu kwihlabathi.Iintlobo zethu ezahlukeneyo ezisandul 'ukukhutshwa, iimveliso ezikumgangatho ophezulu zamazwe aphesheya kunye neenkonzo zabathengi ezinononophelo zixatyiswa kakhulu ziimpawu ezaziwayo ezinje ngeDisney, iMengniu Dairy, Pepsi, njl.
Ngaphezulu kweminyaka engama-25, ukuhlangabezana neemfuno zabaxumi besisoloko sandisa iimveliso zethu, ezibandakanya iphepha lethu kunye nomzi mveliso wokupakisha weplastiki kunye nenkqubo yabathengisi.
Silawule ngokungqongqo umgangatho ngeentonga ezili-10 ze-QC (kubandakanya i-3IQC, 2 IPQC, 5 OQC) kunye nabasebenzi be-4 QA ukusuka kwimveliso engenayo eluhlaza ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo. Sisebenza kunye ne-ISO9001, ISO140000, QS yenkqubo esemgangathweni.
Iqela lethu libonelela ngophando ngemveliso, uyilo, inkqubo kunye nokulandela iinkonzo emva kokuthengisa. Sizithumela ngeemveliso zethu ngexesha, kuba sineenkqubo zokuthengisa ezinokuthenjwa ezingaphezu kwe-1000.
Amava okuthumela ngaphandle
IQELA elitsha lomzi-mveliso weChUNKAI lagqitywa nge Ngo-2015, enobume bobathathu emnye, kubandakanya iindibano zocweyo zeplasIngxowa ye-tic, ibhotile yeplastiki, iimveliso zeplastiki, ibhokisi lephepha, indlu-ware kunye namasebe entengiso, uphando, intengiso,Ukuthatha i-20000 yeemitha zesikwere, ukuba yinkqubo ehlanganisiweyoIndawo yefektri yesitshixo ngeplastiki, ukupakisha kunye nendlu-Umzi mveliso weempahla eShanghai.
IQELA LECHUNKAI Inabasebenzi abancinci abangaphezulu kwe-100 abasebenza kwi-3000 yeemitha zesikwere iofisi kunye nakwimisebenzi engaphezulu kwe-300 yendawo esebenza ngaphezulu kwe-20000 yeemitha zesikwere.inkqubela phambili yamava kunye namava lilitye lendlela eya empumelelweni nasephupheni. Amava ama-4 ukuya kwemi-5 kwimiboniso yasekhaya okanye yamanye amazwe minyaka le, kodwa kananjalo bathatha inxaxheba kwimisebenzi yokwakha amaqela amaninzi, ecaleni elinye nelinye. KWIQELA LECHUNKAI, wonke umntu olandela iphupha elinye ukwanelisa ezona mfuno ziphambili. Gxila kubasebenzi bethu kwixabiso lokusebenza njengeqela kusenza ume ngaphandle kwaye uqhubeke nokuhamba ngesikhephe.
Ke, sihlala sisongeza igazi elitsha kwiqela lethu kunye nokulandela eyona njongo iphambili--Ukuphuhlisa ikhondo lomsebenzi kwaye ungazisoli!